COVID-19 အကြောင်း အမှန်၊ အမှား သိထားသင့်တဲ့ WHO ထုတ်ပြန်ချက်အချို့
WHO ရဲ့ အကြံပြုချက်ကဏ္ဍမှာ ထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပြီး အမေး၊ အဖြေ ပုံစံဖြင့် ပြန်လည် တင်ဆက်ထားပါတယ်။
Ko John•3weeks ago
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း COVID-19 ရောဂါဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ပျံ့နှံ့မှုနဲ့ သေဆုံးမှုတွေက အားလုံးအတွက် သတိပြုစရာ ကျန်းမာရေးအခြေအနေတစ်ရပ် ဖြစ်ပါတယ်။
COVID-19 နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အမှန်၊ အမှား မရေမရာဖြစ်စေနိုင်တဲ့ အချက်အလက်တွေကို ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်း (World Health Organization - WHO) က အများပြည်သူအတွက် အကြံပြုချက်ကဏ္ဍမှာ ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ ဒီထုတ်ပြန်ချက်တွေကို အမေး၊ အဖြေ ပုံစံဖြင့် ပြန်လည် တင်ဆက်ထားပါတယ်။
COVID-19 ဗိုင်းရပ်စ်က ပူပြင်းတဲ့ ရာသီဥတုနဲ့ စိုစွတ်တဲ့ ရာသီဥတုမှာ ရှင်သန်နိုင်သလား?
ရှင်သန်နိုင်ပါတယ်။ ဒီဗိုင်းရပ်စ်က ရာသီဥတုပူတဲ့ နိုင်ငံတွေကိုရော၊ စိုစွတ်တဲ့ ရာသီဥတုရှိတဲ့ နိုင်ငံတွေကိုပါ ကူးစက်ပျံ့နှံ့သလို အေးပြီး ခြောက်သွေ့တဲ့ နိုင်ငံတွေကိုလည်း ကူးစက်ပျံ့နှံ့ပါတယ်။ ဘယ်နေရာမှာနေနေ၊ ရာသီဥတု ဘယ်လိုဖြစ်နေပါစေ အရေးကြီးတာက ကြိုတင်ကာကွယ်မှုတွေကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။
လက်တွေကို မကြာခဏ ဆေးကြောပါ၊ ချောင်းဆိုး၊ နှာချေတဲ့အခါ တစ်ရှူးစက္ကူ သို့မဟုတ် တံတောင်ဆစ်ကွေးနေရာဖြင့် အုပ်ထားပါ။ ထိုသို့ ချောင်းဆိုး၊ နှာချေပြီးပါက အသုံးပြုခဲ့တဲ့ တစ်ရှူးစက္ကူကို အမှိုက်ပုံးထဲသို့ စွန့်ပစ်ပြီး လက်တွေကို ချက်ချင်း ဆေးကြောပါ။
အေးတဲ့ ရာသီဥတုနဲ့ ဆီးနှင်းက COVID-19 ဗိုင်းရပ်စ်ကို သေစေနိုင်သလား?
မသေစေနိုင်ပါဘူး။ ပြင်ပအပူချိန် သို့မဟုတ် ရာသီဥတုကို ထည့်မတွက်ပဲနဲ့ လူ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ပုံမှန်အပူချိန်က ၃၆.၅ ဒီဂရီဆဲလ်စီးယပ်ဝန်းကျင်မှ ၃၇ ဒီဂရီဆဲလ်စီးယပ် ရှိနေပါတယ်။ COVID-19 ဗိုင်းရပ်စ်ကို ကာကွယ်ဖို့အတွက် အထိရောက်ဆုံးနည်းလမ်းက လက်တွေကို အယ်လ်ကိုဟောပါတဲ့ လက်သန့်စင်ဆေးရည် သို့မဟုတ် ရေနဲ့ဆပ်ပြာသုံးပြီး မကြာခဏ ဆေးကြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ရေပူဖြင့် ရေချိုးခြင်းက COVID-19 ကို ကာကွယ်နိုင်သလား?
မကာကွယ်နိုင်ပါဘူး။ လူ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ပုံမှန်အပူချိန်က ၃၆.၅ ဒီဂရီဆဲလ်စီးယပ်ဝန်းကျင်မှ ၃၇ ဒီဂရီဆဲလ်စီးယပ် ရှိနေပါတယ်။ တစ်ကယ်တမ်းက အရမ်းပူတဲ့ရေနဲ့ ရေချိုးခြင်းက အသားအရေကို အပူလောင်စေတာပါပဲ။ ဗိုင်းရပ်စ်ကာကွယ်ဖို့ အထိရောက်ဆုံးနည်းလမ်းက မျက်လုံး၊ ပါးစပ်နဲ့ နှာခေါင်းကို ထိတွေ့နိုင်တဲ့ လက်တွေကို မကြာခဏ ဆေးကြောပေးခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
တရုတ်နဲ့ အခြား COVID-19 ကူးစက်မှုတွေ့ရတဲ့ နိုင်ငံတွေမှာ ထုတ်လုပ်တဲ့ ထုတ်ကုန်တွေကနေတစ်ဆင့် ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်နိုင်သလား?
COVID-19 ဗိုင်းရပ်စ်က မျက်နှာပြင်တွေပေါ်မှာ နာရီအနည်းငယ်မျှ သို့မဟုတ် ရက်များကြာအောင် (မျက်နှာပြင်အမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပြီး) နေနိုင်သည့်တိုင် ရွှေ့ပြောင်းလိုက်ခြင်းဖြစ်စေ၊ တစ်နေရာရာသို့ ပို့ဆောင်လိုက်ခြင်းဖြစ်စေ၊ မတူညီတဲ့ အခြေအနေနဲ့ အပူချိန်တို့နဲ့ ထိတွေ့ပြီးနောက်ပိုင်း ဗိုင်းရပ်စ်ဟာ ဆက်လက် ရှင်သန်နေနိုင်ဖွယ် မရှိပါဘူး။ အကယ်၍ မျက်နှာပြင်တစ်ခုဟာ မသန့်ရှင်းဘူးထင်ပါက ပိုးသတ်ဆေးဖြင့် သန့်စင်စေနိုင်ပါတယ်။ ထိုမျက်နှာပြင်ကို ထိတွေ့ပြီးနောက် လက်တွေကို အယ်လ်ကိုဟောပါတဲ့ လက်သန့်စင်ဆေးရည် သို့မဟုတ် ရေနဲ့ဆပ်ပြာသုံးပြီး ဆေးကြောပါ။
ခြင်ကိုက်ခံရခြင်းကနေ COVID-19 ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်နိုင်သလား?
လက်ရှိအချိန်အထိ COVID-19 ဗိုင်းရပ်စ်ဟာ ခြင်မှတစ်ဆင့် ကူးစက်နိုင်တဲ့ အချက်အလက်၊ အထောက်အထား မရှိပါဘူး။ ဒီဗိုင်းရပ်စ်က အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ဗိုင်းရပ်စ်တစ်မျိုးဖြစ်ပြီး ကူးစက်ခံထားရသူ ချောင်းဆိုးစဥ်၊ နှာချေစဥ် သို့မဟုတ် တံတွေးနဲ့ နှာရည်တို့မှတစ်ဆင့် အဓိကအားဖြင့် ကူးစက်နိုင်ပါတယ်။
COVID-19 ကနေ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ကာကွယ်ဖို့အတွက် အထိရောက်ဆုံးနည်းလမ်းက လက်တွေကို အယ်လ်ကိုဟောပါတဲ့ လက်သန့်စင်ဆေးရည် သို့မဟုတ် ရေနဲ့ဆပ်ပြာသုံးပြီး မကြာခဏ ဆေးကြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အတူ ချောင်းဆိုး၊ နှာချေနေသူတွေနဲ့ အနီးကပ် ထိတွေ့နေထိုင်ခြင်း မပြုပါနဲ့။
နှာခေါင်းကို ဆားရည်ဖြင့် ပုံမှန်ဆေးကြောခြင်းက COVID-19 ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရမှုကို ကာကွယ်နိုင်သလား?
မကာကွယ်နိုင်ပါဘူး။ နှာခေါင်းကို ဆားရည်ဖြင့် ပုံမှန်ဆေးခြင်းက COVID-19 ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရမှု ကာကွယ်နိုင်တဲ့ အထောက်အထား မရှိပါဘူး။ လက်တွေကိုသာ မကြာခဏ ဆေးကြောခြင်းက အထိရောက်ဆုံးနည်းလမ်းပါ။
ပလုတ်ကျင်းဆေးရည်က COVID-19 ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရမှုကို ကာကွယ်နိုင်သလား?
မကာကွယ်နိုင်ပါဘူး။ ပလုတ်ကျင်းဆေးရည် အသုံးပြုခြင်းက COVID-19 ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရမှု ကာကွယ်နိုင်တဲ့ အထောက်အထား မရှိပါဘူး။
လက်အခြောက်ခံစက်တွေက COVID-19 ဗိုင်းရပ်စ်ကို သေစေနိုင်သလား?
မသေစေနိုင်ပါဘူး။ လက်အခြောက်ခံစက်တွေက ဒီဗိုင်းရပ်စ်ကို သေစေနိုင်ဖို့အတွက် ထိရောက်မှုမရှိပါဘူး။ လက်တွေကို အယ်လ်ကိုဟောပါတဲ့ လက်သန့်စင်ဆေးရည် သို့မဟုတ် ရေနဲ့ဆပ်ပြာသုံးပြီး မကြာခဏ ဆေးကြောခြင်းကပဲ COVID-19 ဗိုင်းရပ်စ်ကာကွယ်ရေး ထိရောက်တဲ့နည်းလမ်းပါ။
ပိုမွှားသတ်တဲ့ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်မီးက COVID-19 ဗိုင်းရပ်စ်ကို သေစေနိုင်သလား?
ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်မီး (UV lamp) ကို လက်သန့်စင်ဖို့ သို့မဟုတ် အရေပြားရဲ့ အခြားနေရာတွေကို သန့်စင်ဖို့အတွက် မသုံးသင့်ပါ။ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည် သက်ရောက်မှုက အရေပြား ကျိန်းစပ်မှုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ကို အယ်လ်ကိုဟော သို့မဟုတ် ကလိုရင်းဖြန်းခြင်းက COVID-19 ဗိုင်းရပ်စ်ကို သေစေနိုင်သလား?
မဟုတ်ပါ။ ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကို အယ်လ်ကိုဟော (alcohol) သို့မဟုတ် ကလိုရင်း (chlorine) ဖြန်းခြင်းက ခန္ဓာကိုယ်ထဲ ဝင်သွားပြီးသားဖြစ်တဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်တွေကို မသေစေနိုင်ပါဘူး။ ထိုအရာတွေ ဖြန်းခြင်းက အဝတ်အထည်တွေ ပျက်စီးစေနိုင်ပြီး မျက်လုံး၊ ပါးစပ်ကဲ့သို့ ခန္ဓာကိုယ်နေရာတွေမှာ အမြှေးပါးတွေကို ထိခိုက်စေပါတယ်။ အယ်လ်ကိုဟောနဲ့ ကလိုရင်းဟာ ပိုးသတ်ရာမှာ အသုံးပြုနိုင်တာဖြစ်ပေမဲ့ သင့်လျော်တဲ့ အကြံပြုချက်များအရသာ အသုံးပြုရန် လိုအပ်ပါတယ်။
လက်သန့်စင်ဆေးရည် ဝယ်မရတဲ့အခါ ဘာလုပ်သင့်သလဲ?
လက်သန့်စင်ဆေးရည် မရှိပါက လက်တွေကို ပုံမှန်ဆပ်ပြာနဲ့ ရေသုံးပြီး ဆေးကြောခြင်းကလည်း ထိရောက်မှုရှိပါတယ်။ လက်ချောင်းကြားနေရာတွေ၊ လက်ဖမိုးတွေနဲ့ လက်သည်းတစ်ဝိုက်ကို ဆေးကြောဖို့ မမေ့ပါနဲ့။
COVID-19 ရောဂါဗိုင်းရပ်စ်က လေထဲမှတစ်ဆင့် ကူးစက်ပျံ့နှံ့နိုင်ပါသလား?
(ဥပမာ - လေအေးပေးစက် သို့မဟုတ် အီးစီးကရက်သောက်ပြီး မှုတ်ထုတ်လိုက်မှုမှတစ်ဆင့်)
လက်ရှိ အထောက်အထားတွေအရ ဒီဗိုင်းရပ်စ်ဟာ ကူးစက်ခံထားရသူနဲ့ အနီးကပ် ထိတွေ့မှု သို့မဟုတ် ကူးစက်ခံထားရသူ ချောင်းဆိုး၊ နှာချေရာမှ ထွက်လာတဲ့ အရည်အစက်များမှတစ်ဆင့် အဓိက ကူးစက်ပါတယ်။ ထိုအရည်အစက်များက အကွာအဝေး တစ်မီတာ (၃.၂ ပေ) အောက်ကို ရောက်ရှိနိုင်ပြီး လေထဲမှာ မရှိနေနိုင်ပါဘူး။ သို့သော် မျက်နှာပြင်တစ်ခုခုပေါ်မှာ ရောက်ရှိနေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် လက်ဆေးဖို့နဲ့ ချောင်းဆိုး၊ နှာချေတဲ့အခါ တစ်ရှူးစက္ကူ သို့မဟုတ် တံတောင်ဆစ်ကွေးနေရာဖြင့် အုပ်ထားဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
ကြက်သွန်ဖြူစားခြင်းက COVID-19 ရောဂါကို ကာကွယ်နိုင်သလား?
ကြက်သွန်ဖြူက ကျန်းမာရေးအတွက် ကောင်းမွန်တဲ့ အစားအစာပါ။ သို့သော် လက်ရှိ ကူးစက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ COVID-19 ကို ကြက်သွန်ဖြူစားခြင်းဖြင့် ကာကွယ်နိုင်တဲ့ အထောက်အထား မရှိပါဘူး။
အရက်သောက်တာက COVID-19 ရောဂါဗိုင်းရပ်စ်ကို ကာကွယ်နိုင်သလား?
မကာကွယ်နိုင်ပါ။ အရက်သောက်ခြင်းဖြင့် COVID-19 ဗိုင်းရပ်စ် မကူးစက်အောင် ကာကွယ်နိုင်ခြင်း မရှိပါဘူး။ အရက်က အတန်အသင့်သာ သောက်သုံးသင့်တာပါ။ အရက်မသောက်တတ်သူတွေက ဗိုင်းရပ်စ်ကာကွယ်ဖို့အတွက် အရက်မသောက်သင့်ပါဘူး။
COVID-19 ဗိုင်းရပ်စ်က အသက်ကြီးသူတွေ သို့မဟုတ် ငယ်ရွယ်သူတွေမှာ ပိုကူးစက်နိုင်သလား?
အသက်အရွယ်မရွေး COVID-19 ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်နိုင်ပါတယ်။ အသက်ကြီးသူတွေနဲ့ ပန်းနာရင်ကျပ်၊ ဆီးချို၊ နှလုံးကဲ့သို့ ရောဂါအခံရှိသူတွေဟာ ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရပါက ရောဂါပိုမိုပြင်းထန်နိုင်ပါတယ်။ WHO က အသက်အရွယ်အားလုံးအတွက် လက်သန့်ရှင်းရေးနဲ့ ချောင်းဆိုး၊ နှာချေစဥ် လုပ်ဆောင်သင့်တဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်ကာကွယ်ရေး နည်းလမ်းတွေကို လိုက်နာကြရန် အကြံပြုထားပါတယ်။
ရှိနှင့်ပြီးသား အဆုတ်ရောင်ရောဂါ ကာကွယ်ဆေးတွေက COVID-19 ကို ကာကွယ်နိုင်သလား?
မကာကွယ်နိုင်ပါဘူး။ COVID-19 ရောဂါအတွက် သီးခြားကာကွယ်ဆေး လိုအပ်ပါတယ်။ ရှိနှင့်ပြီးသား အခြား အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ရောဂါကာကွယ်ဆေးတွေက COVID-19 အတွက် မထိရောက်ပါ။
COVID-19 ကာကွယ်ရေးနဲ့ ကုသရေး သတ်မှတ်ဆေးဝါးများ ရှိပါသလား?
လက်ရှိအချိန်အထိ COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ရန် သို့မဟုတ် ကုသရန်အတွက် ထောက်ခံအတည်ပြုထားတဲ့ သတ်မှတ်ဆေးဝါး မရှိသေးပါဘူး။
ပဋိဇီဝဆေးတွေက COVID-19 ကာကွယ်မှုနဲ့ ကုသမှုမှာ ထိရောက်ပါသလား?
ထိရောက်မှု မရှိပါ။ ပဋိဇီဝဆေးတွေက ဗိုင်းရပ်စ်ကို မတိုက်ဖျက်နိုင်ပါဘူး။ ဘက်တီးရီးယားကိုသာ တိုက်ဖျက်နိုင်ပါတယ်။ COVID-19 ရောဂါဗိုင်းရပ်စ်က ဗိုင်းရပ်စ်တစ်မျိုးဖြစ်တာကြောင့် ပဋိဇီဝဆေးတွေကို ဒီဗိုင်းရပ်စ်ကာကွယ်ဖို့နဲ့ ကူးစက်ခံရပါက ကုသဖို့အတွက် မသုံးသင့်ပါ။ သို့သော် COVID-19 ကြောင့် ဆေးရုံတက်ရပါက ဘက်တီးရီးယားကြောင့်ဖြစ်တဲ့ ရောဂါ ပူးတွဲဖြစ်နိုင်တာကြောင့် ပဋိဇီဝဆေးတွေ သောက်ရနိုင်ပါတယ်။
Source: World Health Organizaion, Photo and Image: Reuters, The Guardian, Telegraph